I-Amalthia Luxury Suite eMykonos kunye nephuli yabucala
Plintri, Mykonos, Cyclades, Greece
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguGeorge
Isitudiyo esithandekayo esingama-39 m² esinedama lokuqubha labucala kunye nebhafu eshushu, i-spa ye-3, umbono omangalisayo wolwandle, indawo enkulu yangaphandle enefenitshala ejikeleze idama, igumbi lokulala eli-1, igumbi lokuhlala kunye nekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Igumbi lokulala libonisa ibhedi yobukhulu bendlovukazi enomandlalo we-anatomic.Igumbi lokuhlala linesofa enkulu kunye nemiqamelo ezaliswe ziintsiba zerhanisi, inokwamkela umntwana okanye umntu omdala.
I-SMART TV 43" kunye neNETFLIX yasimahla.
Inkqubo yesandi yeBluetooth HiFi.
Iinkwenkwezi ezi-5 zokuhlala eziphumlileyo kunye nePrestigious yokuhlala yabucala!
Iiholide zephupha kwi-villa yephupha eMykonos
Emazantsi eKounoupas, i-Amallini Suites iyakumema ukuba wenze ezona nkumbulo zikhethekileyo.
Umbono omangalisayo wolwandle unika indawo ekhululekile kunye neyamkelekileyo kwiindwendwe zabo. Iimbono eziphefumlayo zeParadesi eyiSuper, iAgrari kunye noElia ziya kukuthwala umke.
Ukufikelela kwiilwandle kunye ne-Ano Mera kulula nangona kunjalo.
Amallini Suites abekwe kumgama oziikhilomitha ezi-2,5 kuphela ukusuka kweyona marike ikufutshane, ivenkile yokubhaka, njl njl. amd 4 km ukusuka kwidolophu yaseMykonos. Ibekwe kwindawo ezolileyo, i-Amallini Suites yimbonakaliso yokuzola kunye nokufikelela lula kwiilwandle kunye ne-Ano Mera.
I-suite nganye ine-air conditioning system yayo, i-satellite smart 43" TV ene-NETFLIX yasimahla, umatshini we-espresso kunye ne-Bluetooth HiFi inkqubo yesandi. I-anatomic queen size size mattresses, i-24cm ubukhulu kunye ne-Waterfoam kunye ne-Memory foam, inika induduzo kunye nesiqinisekiso sokulala kakuhle ebusuku. Zingenise kwiisofa ezitofotofo kunye neecushion ezinkulu kwaye uchithe ixesha kunye nosapho kunye nabahlobo bakho.
Amachibi amabini angenasiphelo kunye neebhafu ezimbini ezishushu zigqibezela ukubanjwa kobunewunewu!
Inkonzo yokuhlamba impahla, ukurenta imoto okanye ibhayisekile kunye nokudluliselwa kweVIP ziyafumaneka nangeendleko ezongezelelweyo.
Ubomi buhle e-Amallini Suites. Phila!
I-Cosmopolitan kwaye izolile
Wamkelekile kwesona siqithi sidumileyo saseGreece, iparadesi eqatywe mhlophe entliziyweni ye-e Cyclades. Ngokutsho kweentsomi, iMykonos yenziwa kwimizimba eyoyikisayo yezigebenga ezibulewe nguHercules. Ngaba uyazi ukuba isiqithi sabizwa ngokuba ngumzukulwana ka-Apollo, "Mykonos"?
Qalisa kuhambo lokufumana ilizwe elinomdla apho ubukhazikhazi budibana nokulula. Kubantu abadumileyo baseMykonos, abafundi beekholeji kunye neentsapho zidibana kunye ukubhiyozela ihlobo lamaGrike. Nokuba undwendwela iMykonos kubomi bayo bobusuku obuzukileyo, okanye unqwenela ukuphonononga imbali yesiqithi kunye nesiko, iMykonos ngokuqinisekileyo iya kudlula ulindelo lwakho.
I-Amallini Suites ikwi-2,5 km kuphela ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya kunye ne-4 km ukusuka kwidolophu yaseMykonos. Ibekwe kwindawo ezolileyo, i-Amallini Suites ingumzekelo wokuzola. Ukufikelela kwiilwandle ezidumileyo, iiklabhu, iScorpios, iNammos, iSuper Paradise kunye nelali yase-Ano Mera kulula nangona kunjalo.
Siyafumaneka kwimibuzo yethu.
Thumela umyalezo ku-Airbnb messenger kwaye siphendula ngokukhawuleza.
Ngovuyo siza kuba lapha ukuze sinamkele buqu!😃
Inombolo yomthetho: 10510260000